IIRAAN oo Jawaab yaab leh ka bixisay Gurmad uga yimaada dhinaca Maraykanka ! | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
IIRAAN oo Jawaab yaab leh ka bixisay Gurmad uga yimaada dhinaca Maraykanka !
Mar 23, 2020 - Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale ) Dalka Iiraan ayaa ka mid ah dalalka uu faraha ba’an ku hayo cudurka Corona tan iyo intii uu cudurka caalamka ka dilaacay, Waxaana Hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan uu diiday dalab ay Mareykanka u soo bandhigeen oo ahaa in IIRAAN la siiyo kaalmo dhaqaale si gacan looga siiyo dagaalka ka dhanka ah caabuqa coronavirus.
Khudbad uu telefishinka dalkaasi ka jeediyay, Ayatollah Cali Khamenei ayaa sheegay in Mareykanku yahay “cadowga ugu xun ee Iiraan”, Wuxuuna carabka ku dhuftay in laga yaabo in Mareykanka ay wadaan shirqoolo taasi oo ay horey uga shanqariyeen saraakiisha Shiinaha oo sheegay in Maeykanka ay masuul ka yihiin cudurkan coronavirus .
“Ma ogin in ay jirto eedeeyntan, balse ma jirto qofka maskaxdiisa ay caadi tahay oo aaminaya in ay daawo noo keenaan?” “Waxaa suurogal ah in daawadiina ay tahay qaab lagu fidinayo caabuqa coronavirus” ayuu intaa ku daray.
Saraakiisha kale ee Reer Iiraan ayaa waxay dhankooda ku eedeeyeen Mareykanka in uu wado munaafuqnnimo marka uu kaalmo u ballanqaadayo Iiraan, iyada oo uu diidayo in uu cunaqabataynta ka qaado Iiraan.
IIRAAN waa dalka tirada ugu badan uu soo ritay cudurkan guud ahaan dalalka bariga dhexe, Cudurkan ayaana soo ritay In ka badan 21,600 guud dalkaasi, Waxaana u dhitay 1,685.
Balse waxaa laga walaacsan yahay in tirada cudurka u dhimatay iyo inta uu soo ritay ay intaasi ka badan tahay, Iyadoo dowldda Iiraan ay saaran cunaqabatayn taasi oo xaaladda si murjisay islamarkana daawooyiinka muhiimka ma gaadhi karaan dalkaasi.